Ireo mpamatsy aluminium Aerosol dia afaka manome mpamatsy sy orinasa mpanamboatra China Aerosol Can China
Amidio ny vokatra mafana indrindra ho an'ny milina fanodinana rongony 500ml tsy misy fangarony vita amin'ny vy Aerosol
Fampiasana: kosmetika, fampiasana isan'andro, deodorant, ranomanitra, shampoo, fanafody, sns.
Vita farany: Fanontana lamba / famindrana hafanana / fanontana offset
Famonoana anaty: fonosana epoxy ao anatiny
Karazana famehezana: PUMP SPRAYER, Pump Sprayer, valizy ary satroka plastika ivelany
Anaran'ny marika: OEM / ODM
Mpanamboatra tavoahangy kapsily kapila fotsy mainty ambongadiny
Endrika mahaliana, lamaody, azo entina.
Dispenser aerosol mandeha ho azy miaraka amin'ny can aerosol can for foam
Fampiasana: kosmetika, fampiasana isan'andro, deodorant, ranomanitra
Manana ekipa mpamorona matihanina izahay hamaly ny filanao manokana.
2021 kalitao 300ml tsy misy fangarony poakaty erifotra vita amin'ny loko vita amin'ny tavoahangy tavoahangy
Ampiasao: menaka, kosmetika, menaka fanosotra, mousse, detergent, fanafody, rivotra ...
Tavoahangy malaza malaza be faran'izay tsara 10ml tavoahangy mainty mainty
Surface: polishing, fanontana offset miloko 1-9
Karazana famehezana: Pump Sprayer, valizy ary satroka plastika ivelany
Paompy voninkazo mahafinaritra tavoahangy savony savony 50ml
Voasarimakirana vita amin'ny kesika vita amin'ny rivotra Aerosol Cans tavoahangy lehibe
Ny mpiasanay dia ao anatin'ny fanahin'ny "fanatsarana sy ny hatsarana hatrany", ary miaraka amin'ny vokatra avo lenta, ny vidiny mirary ary ny serivisy aorinan'ny varotra tsara, manandrana mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa rehetra izahay amin'ny vidinyList ho an'ny aerosol Aluminium, mbola eo an-dàlana ve ianao mitadiava vokatra tsara kalitao izay mifanaraka amin'ny sarinao fandaminana tena tsara raha manitatra ny elanelan'ny entanao? Diniho ny entam-barotra entinay. Ho hendry ny safidinao!
PriceList ho an'ny fonosana alimina ao Shina, mifantoka amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifanay izahay ho singa iray lehibe amin'ny fanamafisana ny fifandraisanay maharitra. Ny fisianay tsy tapaka ny vokatra avo lenta miaraka amina serivisy mialoha sy fivarotana tsara indrindra dia miantoka ny fifaninanana matanjaka amin'ny tsena mihombo manerantany.
2020 santionany avo lenta maimaim-poana aerosol afaka 650ml aromaric
Tavoahangy vita amin'ny rivotra aerosol alimo vita amin'ny alimo vy
Fampiasana: ranomanitra, kosmetika, menaka fanosotra, mousse, detergent, fanafody, sns.
Surface: fanontana offset miloko 1-9
Ny kaontenera aliminioma dia safidy tsara hiarovana ny vokatra tsy ho tara-pahazavana sy ny fanamafisana orina ary noho izany dia manampy amin'ny fanitarana ny androm-piainan'ny vokatrao.
Mpitondra menaka tavoahangy tavoahangy faran'izay tsara kalitao ho an'ny fandrahoana fitaovana mahandro vilany
Can aerosol menaka mahandro kalitao. Poloney, fanontana offset miloko 1-9, endrika manintona, lamaody, azo entina
Fantsom-pifandraisana rivotra tsy madio tsy misy fangarony tavoahangy alimo aerosol afaka
1.Aluminum aerosol afaka habe
Manolotra karazana aerosol vita amin'ny aliminioma ho an'ny habe amin'ny savaivony hatramin'ny 22mm ka hatramin'ny 66mm, ary amin'ny 50mm ka hatramin'ny 240mm ny haavony. Manana haben'ny vozony ihany koa izahay ho an'ny 20mm sy 25.4mm.
2.Materaly sy endrika
Mampiasa aliminioma manta izahay amin'ny fahadiovana 99,7%. Ankoatry ny endrika mahazatra amin'ny soroka boribory, manana endrika tavoahangy maro samihafa koa izahay toy ny bala sy ny sisiny ary endrika manokana hihaonana amin'ny filanao manokana ary hampiavaka ny vokatrao.
Manana fampiasa betsaka izy io. Toy ny tabilao masoandro, kosmetika, fanafody, oksizenina ary dipoavatra, vaovao kokoa amin'ny rivotra, karazana vokatra fikarakarana isan'andro. Manomboka amin'ny fikarakarana manokana sy ny vokatra ao an-trano ka hatrany amin'ny vahaolana indostrialy.
Kaontenera porofo tsy misy lasitra, fanoherana lehibe ny tsindry anatiny (fenitra: bara 12 sy 18);
Afaka manao pirinty offset miloko 9 be indrindra izahay; Vokatry ny fanontana isan-karazany: vokan'ny glitter, effets an'ny pearlescent, vokarin'ny borosy aluminium, firakotra maro loko, Matt ary famaranana gloss